HAVATSE UPEM : Mitohy hatrany amin’ny fiarovana ny teny malagasy sy ny kolontsaina
Ny teny dia anisany kolontsaina mampiavaka ny firenena iray. Araka izany dia manana tombony manokana amin’ny fananany ny teny malagasy i Madagasikara. 25 octobre 2017
Teny izay iavahany amin’ireo firenena rehetra maneran-tany. Ny indro kely anefa dia toa somary nihen-danja izany teny malagasy izany amin’izao vanim-potoana izao vokatry ny fanatontoloana sy ny fandrosoana maro samihafa. Manoloana izany dia ny fiarovana ny teny sy ny kolontsaina no anisan’ny fototra niorenan’ny Havatse Upem, efa ho 65 taona lasa izao. Mbola mifototra amin’ny fiarovana izany ny fikambanana, indrindra amin’izao fivoaran’ny teknolojia mamotika ny kolontsaina izao.
Araka ny fanazavan’ny filohan’ny Havatse Upem, Andrianasolo Hajaina, dia antony maro no mahatonga ny fahapotehan’ny teny malagasy. Saingy anisany tena mahalatsa-danja izany teny izany ankehitriny ny tontolon’ny tranonkala sy ny simaiso izay miroborobo fatratra amin’izao fotoana izao. Efa lasa ireo teny sy soratra diso no raikitra ao an-dohan’ny tanora ankehitriny, hany ka diso hatrany amin’ireo fanadinana ofisialy atao mihitsy izany.
Ny fahitana ireny tranga ireny no mbola antom-pisian’ny Havatse Upem hatramin’izao, hoy ny filohany. Hiaro ny teny malagasy amin’ny fitenenana, sy ho ara-pitsipika amin’ny fanoratana azy no tanjona. Ao amin’ny fikambanana dia misy atrikasa isankarazany mba entina manatratra izay tanjona sy ny antom-pisiany izay. Anisan’izany ny atrikasa momban’ny poezia, momban’ny sombin-tantara sy ny tontolon’ny fanoratana amin’ny ankapobeny mihitsy.
Tsy afaka manoratra mantsy ny mpanoratra iray raha tsy voafehy ny teny hampiasaina miaraka amin’ny fitsipika mifehy azy. Ankehitriny dia efa misokatra ihany koa ny herinandron’ny Havatse upem izay hetsika efa fanao isan-taona. Amin’ity andiany ity dia fampirantiana asa soratra, antsa tononkalo, varotra boky, resadresaka amin’ny mpanoratra no hita ao amin’ny Tahala Rarihasina, efa nanomboka tamin’ny alatsinainy lasa teo.